दिनको सुरुवात यौनक्रियाबाट गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा - samayapost.com
दिनको सुरुवात यौनक्रियाबाट गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा
समयपोष्ट २०७८ जेठ ४ गते २०:५५
विज्ञहरूले बिहानीपख सेक्स गर्नु मर्निङ वाक वा व्यायाम गर्नुभन्दा हितकर हुने बताएका छन् । बिहानीपखको सेक्सले शरीरका मांसपेसीलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ, रक्तसञ्चार ठीक राख्छ र मुटुलाई समेत स्वस्थ बनाउँछ । बिहानीपखको राम्रो ब्रेकफास्टले दिनभर शरीर फुर्तिलो राख्न मद्दत गर्छ भन्ने भनाइ छ ।
यसलाई यौनक्रियासँग तुलना गर्दै अमेरिकी यौन परामर्शदाता डा. डेभी हरबेनिकले बिहानै गरिने सहवास स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा बढी लाभदायक हुने बताएका छन् । ‘प्रायः मान्छेहरू बिहान खाइने एक कप मीठो चियालाई पनि दिनको राम्रो सुरुवातका रूपमा लिन्छन्,’ डा. डेभीको भनाइ छ– ‘दिनको सुरुवात स्वस्थ यौनक्रियाबाट गर्ने मान्छेको स्वास्थ्य झन् राम्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार उषाकालमा यौनक्रियामा संलग्न हुँदा शरीरबाट निस्किने एक प्रकारको रसायनले मानिसलाई अझ बढी सन्तुष्टि दिन्छ र खुसी बनाउँछ । खुसी मिलेपछि स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा दुई मत छैन ।
अर्का अमेरिकी यौन परामर्शदाता जेन ग्रिगर पनि यो कुरामा सहमत छन् । ‘बिहान सबैलाई अन्य काम गर्न हतार हुन्छ’, उनी भन्छन्– ‘यस्तोमा यौनक्रियासमेत छिटछिटो गरिन्छ । यसो गर्नाले शारीरिक गतिविधि बढी तीव्र भएर व्यायामबाट जस्तै फाइदा पाइन्छ ।’ डा. डेभीले आफ्नो अनुसन्धानको पक्षमा वेलफास्ट विश्वविद्यालयको अध्ययनलाई समेत उद्धृत गरेका छन् । उक्त अध्ययनका अनुसार सातामा तीनपटक यौनक्रिया गर्नाले कुनै पनि किसिमको स्ट्रोक हुने खतरा आधा घट्छ । अर्को अध्ययनका आधारमा डेभीले बिहानै यौनक्रियामा लिप्त हुँदा पुरुष र महिला दुवैको प्रजनन क्षमता बढ्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।